musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Belgian Nhabvu Vatambi Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Batsman". Our Michy Batshuayi Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekwanisiro yake yekubvisa zvinangwa zvinoshamisa asi vashomanana chete vanoona Bio Batshuayi's Bio iyo inonakidza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Kutanga kubva, Michy Batshuayi Atunga akaberekwa musi we 2nd weOctober 1993 muBrussels, Belgium. Akazvarwa kuna amai vake, Viviane Leya Iseka uye kuna baba vake, Pino Batshuayi. Vabereki vose vari veAfrica Kubva uye vanocherechedza midzi yavo kudzokera kuDemocratic Republic of Congo. Vakatamira kuBelguim vachitsvaga mafuro akaoma uye kuchengetedza zvakanaka vana vavo vasati vaberekwa.
Achikura muBrussels, Young Batshuayi aitsigirwa nevabereki vake vane mutambo vane rudo vakamukurudzira pamwe nehanzvadzi yake Aaron Leya Iseka (uyewo mutambi wechirwi) kukura nekuita zvemitambo yavakanga vaifarira.
Kutsigirwa kwavo kwakanyanya kusimbiswa nekuti Bhatshuiyi akaratidza simba rakanaka rokutamba kwebhora risina kungoita kuti aoneke pakati pezera rake asi akabviswa pahama yake duku iyo yakasarudza uye yakatanga kufarira mubhola.
Hazvina nguva refu vabereki vaBatshuayi vakapa kukurudzira mukuda kwake kwebhola nekumunyorera pachikoro chechidiki, RFC Evere, kutanga pakati pebhuku revechidiki vana apo akatanga basa rake.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Career Buildup
Nzira yekutamba iyo Batshuayi yakaratidzwa nayo munguva yekambani yake yevechidiki yakaedza yakanga iri tsika yake yekuita kwenguva yakareba nebhora risingapfuuri, chiito chakaita kuti vatevedzeri vake vamuone seanodyire.
Kunyange zvakadaro, akawana nyasha kune vanocheka kubva kune mamwe makirasi avo vakaona kunze kwekufunga kwake udyire. Anonyanya kuzivikanwa pakati pehupenyu hwake hwevechidiki akanga ari kuenda kuAnderlecht yechikwata chechidiki mu2007 kwaakakwanisa kuita nheyo yepamusoro-soro uye yakasunungurwa zvinangwa.
Iyo fomu yepamusoro haina kuenda isingazivikanwi nekambani yebatsigiri Standard Liège uyo akachengetedza mabasa ake mu2008. Batshui akave akazvicherechedza muchechi nemakwikwi ake akanaka uye akakurudzirwa kuboka rakakura paakanga akwegura 18.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Simuka Mukurumbira
Batshuayi akanga asiri wekurasikirwa mberi nebasa raakange achida. Mafomu ake akachengetedzwa akamuona achikwikwidza 21 vavariro munguva ye 2013 / 2014 ye Standard Standard. Uyu uye pakati pevamwe vazhinji vakamuita kuti akunde Ebony Shoe Award yakapiwa mukucherechedza vakanakisisa vomuAfrica mutsva muBelgium mapoka ekutanga mapoka.
Bhatishuyi akaenderera mberi nekugadzira zvigadzirwa zvake paMarseille, kechikwata cheFrance chaakasaina mu 2014. Zvakanga zviri kuMarseille kuti fomu yake yekuchengetedza zvigaro yakagamuchira kufarira kwemaChirungu akawanda aisanganisira Chelsea FC neWestham. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Batshuayi ndeimwe pakati pevashoma vashoma vatambi vematambo avo vanochengetedza nezvehupenyu hwehukama hwavo. Izvi zvakagara zvichiita kuti munhu wose afungisise kuti ndiani akanaka kutarisa chingave achifambidzana panguva ino.
Hapana mukadzi akaonekwa pamwe naye pane chimwe chiitiko kana kunyange kunze. Nepo vakawanda vachifunga kuti akanaka pakuchengetedza hupenyu hwake hwega wega, vamwe vanofunga kuti inongova nyaya yenguva asati azarura ngoro yake kana musikana. Iva nechokwadi, tinogona kupa zvigadziriswe zvekufambira mberi mune izvozvi pavanenge vachiitika.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Nyaya neFIFA Nhamba
Michy ari pakati pevatambi vanonyatsoshushikana nezvekunaka kwake muE Sports Sports 'yakanyanya kutamba mutsara webhola. Cherechedza maitiro ake kune yake 2018 FIFA yakabudiswa pasi;
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Zvinoratidzika kunge zvisina kufanira kujekesa
Apo Batshuayi akanga ari kuCentral akave pasi pemoto wakaoma mushure mokunge mutsara wemutambo wakaoma wakaratidzwa kumubata kuseka kune waaifambidzana navo Alvaro Morata nokuda kurasikirwa nechirango. Chiitiko ichi chakaitika panguva yekukwikwidza kweCentral kweAlexal kuArenal mumagumisiro echikwata chevanhu ve2017. Batshuayi akatsiviwa naMorata panguva yemuchina 74th yemutambo wekusakwanisa kufadza.
Mutambo wacho waiputika neka 1-1 kuteka, achisiya zvikwereti kuti asarudze uyo anokunda. Alvaro Morata pamwe chete Thibaut Courtois Zvikwereti zvakakosha zvakakisa izvo Arsenal yakakunda mutsara. Chii chakaita kuti vatsamwi vatsamwiswe apo apo mifananidzo yakaratidzwa kuratidzira Batshuayi achiseka shure kwaMorata uyo akave akarwadziwa nekurasikirwa.
Zvisinei, Batshuayi akaenderera mberi pa Twitter nguva pfupi kuti agadzirise zvaakatora sechinhu chisina kururama nekucherechedza kuti:
"Wow lol vamwe vanhu vanofunga kuti ini ndakaseka kune vandaifambidzana neni uye / kana isu tichirasikirwa? Ndine urombo kuti ndikudzwe asi ini ndakanga ndisiri "
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Rudo rwemavara
Batshuayi ane penchant yekuona uye kutevera cartoon series. Basa iro rimwe remabasa ake ekufambisa rine zvinosvika pamagumisiro kunze kwekuvaraidza sezvo zvinomiririra pfungwa yake yemafashoni. Anonyanya kuzivikanwa pakati pevashandi vake vanofarira cartoon ndiSponge Bob uye haasati aita seine zvakakwana zveEponge Bob katuni.
Mukuwedzera, aimboona akapfekedzwa mubhokisi pasi payo kate. Mubhokisi (iyo inoratidzwa pasi apa pasi pepfupi shoma) anoratidza yakadzika yegungwa pasi pechikwata chake. Zvechokwadi rudo rwake rwekarikisi haruna ruzivo.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Big Kid iri Mwoyo
Batshuyi ndeye asingaiti seanoita sezera rake sechiratidzo nechekuunganidza kwevana. Uyu 25-ane makore ane chikwata chikuru chezviyero zvaanotsanangura semuziyamu wake oga. Iyo "museum" inosanganisira girazi rakawanda rakazara nezviduku zvitsva zvinowanikwa.
Kwete zviduku zviduku, Batshuayi anoita kunge akawana chido chikuru chinoratidzika chakafanana nezera rake. Icho chifananidzo chakazara-chema kubva pamifananidzo yakakurumbira Dragon Ball Z.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Zvikonzero Zvinotadzisa Mhembere
Nokuda kworudo rwake kune varaidzo, Batshuayi akapiwa zita rezita rokuti 'Batsman', chimiro chaanoda uye chinomutsanangurawo. Iyo Batman hunhu inotaridzwa seye inouya kubva murima kuti iite zvisingafungidziriki.
Batshuayi anobva kubhenji uye achiri kuita magetsi ekugadzira zvinangwa. Achitaura nezvezvinangwa, Michi yaFIFA 2018 yeChirongwa cheNyika yeChirongwa chekuita chikwata chekare chakakundikana sezvaakamboona ibhola iye akapfura kuchinangwa chekudzokera shure.
Michy Batshuayi Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Personality Facts
Michy Batshuayi ndiye anoda zvaanoita uye anobudisa ruzivo rwemhanzi kunyange kana zvinhu zvisingaendi nenzira yaanoronga. Kunyange zvakadaro, anoshanda zvakaoma uye anoedza zvakanakisisa zvaanogona kuita kuti zvaanoita zvionekwe kusingabatsiri.
Mukuwedzera, Anoshamwaridzana, ane pfungwa yekukurukurirana uye anoedza zvakanakisisa zvingaita kuti arege kupikisana.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga Michy Batshuayi Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Ross Barkley Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Tammy Abraham Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts